रोल्पामा वामगठबन्धनका कार्यकर्ताको अपहरण - Everest Dainik - News from Nepal
रोल्पामा वामगठबन्धनका कार्यकर्ताको अपहरण
रोल्पा, मंसिर ८ । पटक पटक बम विस्फोट गराईरहेका नेकपाका कार्यकर्ताले नेकपा (एमाले)को एक कार्यकर्ताको अपहरण गरेका छन् ।
नेकपाका कार्यकर्ताले रोल्पा–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चका सचिव नवीन खड्कालाई बिहीबार साँझ सुकीदह गाउँपालिका–३, डाँडाखुटीबाट अपहरण गरका हुन् । उनीसँगै माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता विष्णु खड्कालाई पनि नेकपाका कार्यकर्ताले अपहरण प्रयास गरेका थिए ।
तर, उनलाई स्थानीय बासिन्दाले प्रतिकार गरेर बचाएका थिए । अपहरणमा परेका नवीन खड्कालाई करिब २४ घण्टापछि शुक्रबार विहान मुक्त गरेका छन् । संयुक्त वामगठबन्धन निर्वाचन परिचालन समिति, रोल्पाका संयोजक गोकुल घर्तीले शुक्रबार विहान प्रेस वक्तव्य जारी गरेर नवीन खड्कालाई अपहरण गरेको र विष्णु खड्कालाई अपहरण प्रयास गरेको जनाएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस योगेश भट्टराई भन्छन : 'एकतापछि पार्टी प्रचण्डको कब्जामा हुन्छ'
उनले नवीन खड्का शुक्रबार विहान अपहरणमुक्त भई सम्पर्कमा आएको जनाउँदै अपहरण घटनाको निन्दा गरेका छन् । ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको निर्वाचन प्रचार प्रसारको क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरुले नेकपा (एमाले)का रोल्पा–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चका सचिव क. नवीन खड्कालाई अपहरण र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का कार्यकर्ता क. विष्णु खड्कालाई अपहरण प्रयास गरेको घटनाप्रति संयुक्त वाम गठबन्धनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, उनले वक्तव्यमा भनेका छन्,